लकडाउन छिटो खुकुलो पारे घातक हुने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको चेतावनी — janadristi
२९ चैत २०७६, शनिवार ०८:४९
युरोपमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको मारमा परेको इटली र स्पेनले लकडाउनलाई जारी राख्दै बन्देज केही खुकुलो पार्ने बताइरहेका बेला गेहब्रेयससको चेतावनी आएको हो। कतिपय देशहरूले बन्दाबन्दीका कारण गम्भीर आर्थिक प्रभाव बेहोरिरहेका छन्।
युरोपमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको सबभन्दा खराब असर बेहोरिरहेका इटली र स्पेनले त्यहाँ लगाइएका लकडाउनलाई जारी राख्दै बन्देजमा केही खुकुलो पार्ने बताएका छन्।
संसारभरिमा अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या १६ लाख नाघेको छ भने मर्नेहरूको सङ्ख्या पनि १ लाख नाघेको छ।
जिनिभामा आयोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै डा. टेड्रसले युरोपेली देशहरूमा सङ्क्रमणको गति सन्तोषप्रद ढङ्गले घटिरहेको बताए।
डब्लूएचओका प्रमुखले केही युरोपेली देशमा सङ्क्रमणको गति घटेकोमा सन्तोष प्रकट गरेका छन्।
अमेरिकामा पनि अधिकारीहरूले त्यहाँ कोरोनाभाइरसको महामारी अब उच्च तहमा पुग्न लागेको हुनसक्ने बताएका छन्।
यसबीच डा. टेड्रसले भाइरस अब अन्य देशमा तीव्र दरले फैलिरहेको चेतावनी दिएका छन्। उनले अफ्रीकामा ग्रामीण क्षेत्रमा भाइरस पुगेको बताए।